/ Products / Fat Kurasikirwa poda / Synephrine powder
SKU: 94-07-5. Category: Fat Kurasikirwa poda
Synephrine powder inowanzoita ocction alkaloid iyo inonzi inofadza uye inoita nootropic nemhaka yekuti inobatsira pakurema kwekureruka nekugadzirisa maitiro muuropi. Nenzira yekuti Synephrine powder inowanikwa mune zvimwe zvirimwa nemhuka, kunyanya yakawanda Synephrine powder inowanikwa mune zvekudya zvinowedzera zvinobudiswa uye inogadzirwa kubva kuCitrus Aurantium Plant inowanzozivikanwa seBitter Orange yakabudiswa.
Kuti ushandise zvinoshandiswa nemagetsi uye simba reSynephrin powder, zvinotorwa zvakanakisisa chinhu mangwanani kana 15 - 30 maminitsi musati maitiro. Pre-workout uye kurasikirwa kwemafuta zvinowedzera zvinosanganisira Synephrine powder zvinofanira kutorwa nemvura isati yaitwa. Nhamba inoshanda zvikuru ndeye 15 - 25 milligrams pamushandi.
Kunze kwekwaniso yekudzivisa kudya, Synephrine powder inoratidza zero uchapupu hwekukwanisa kupisa mafuta pachayo. Nokudaro, pfupa yeSyphrine haigoni kuonekwa sehuni hunopisa. Nokutora Pure Synephrine nemafuta zvinopisa, iwe uchaona kuti iwe hauzowedzereki kuedza kunwa panguva yezuva rako sezvo iwe uchagara wakakwana kwenguva yakareba uye unenge uine zero unoda kudya kudarika zvaunoreva zuva rega rega.
Ichokwadi ndechekuti iwe wakafanana nevanhu vazhinji, iwe hausi kuzoona zvakawanda kana iwe uchitora Synephrine powder Vakawanda vanorondedzera kuwedzera zvishoma kwemasimba pasina rimwe dambudziko rinowanzobatanidzwa nekukurudzira (jitters, nausea, nekushaya mwoyo nokukurumidza, nezvimwewo. ).
Ko Synephrine powder inobatsira here kuti ureruke?